[I-Tribune] I-COP25: Izwe elingcolisa kumele libuyisele isikweletu salo sendawo - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
[I-Tribune] I-COP25: Izwe elingcolisa kumele libuyise isikweletu salo sendawo - JeuneAfrique.com
By TELES RELAY	 On I-Decc 8, i-2019
I-Apple isanda kuthumela enye yezinzuzo ezinkulu…
AbaseMelika abasuka eWuhan, eChina, bafuna ukuphunyuka…
UMeghan Markle noPrince Harry "bathuswe" yisinqumo esenziwe…
Thina, ama-blogger aseMaliyali naseCongo, sikulungele ukusebenzela imvelo, kepha sicela amazwe angcolile ukuba abeke isibonelo.
EMali naseDRC, njengakwamanye amazwe amaningi ase-Afrika, sihlangabezana nomonakalo ophelele obangelwa ukushintsha kwesimo sezulu. Siyazi ukuthi eminye imikhuba yendabuko, ehlobene nentuthuko yabantu kanye nomnotho, inesibopho esithile kulokhu kukhuphuka kwamagesi abamba ukushisa abamba ukushisa (GHG).
Kepha lokhu akulutho uma kuqhathaniswa nokukhishwa kwamazwe amakhulu angcolisa ezingeni lomhlaba, neChina, United States, European Union, India neRussia ehola indlela. Ngenkathi izwekazi elikhulu lase-Afrika, elikhipha ngaphansi kwe-4% yevolumu ephelele, kungowokuqala ukuzwa imiphumela.
Ngempela, izehlakalo ezinkulu zezulu (izikhukhula ezinkuluizinkathi ezinde zomswakama) ziyaphumelela omunye komunye, zihlala zinobudlova futhi ziba nzima kakhulu ukubekezelela. Ezinye izindawo ezingcolisa umhlaba ziyasisiza ngesinye isikhathi, kepha azisoze zivume ukuthi yizo ezibhekele kakhulu kulezi zinhlekelele zemvelo eziphindaphindwayo.
Okubi kakhulu, kuzobe kuphunyuke kunoma ngubani ukuthi ezifundeni ezomile kakhulu zeSahel ukuthi amaqembu ahlomile (ama-jihadists noma cha) athuthuka, futhi wenze imisebenzi yabo ebulalayo. Babheka ukungezwani phakathi kwamaqembu omphakathi abefundisi nabalimi, abaxhumene nobunzima bamadlelo kanye nezindawo zamanzi, ikakhulukazi enkabeni Mali. Ushintsho lwesimo sezulu seluwumbimbi omuhle kakhulu wamaqembu amaphekula, athi angcolisayo athi alwa.
Ngenxa yokumboza okukhulu kwamahlathi, i-DRC isisinki sokuhlelwa kabusha kwe-carbon dioxide ebaluleke kakhulu. Kepha ukungena, izinkampani ziphinde zivela emazweni angcolisa kakhulu, ngokwengxenye kusongela ukungabaza ukuthi bekucatshangwa ukuthi kuyimpahla engenakuphikwa.
Ngisho noguquko lwedijithali lukhombisa ukuthi lungcolisa kakhulu futhi alulingani kunezwe elidala lezimboni
Ngabe kufanele siqhubeke nokusebenzisa lokhu kudla okuluhlaza, kanti ezinye izifundazwe ezazingumbuso wazo ziqhubeka nokuphanga lezi zinsizakusebenza, ngaphandle kokukhathazeka ngomthelela wezemvelo? Namuhla, lezi zifundazwe ezifanayo zithanda ukuthi sisebenzise imithetho eqinile yokusika ngaphandle kokunciphisa ukulahleka.
Ngisho nokuguqulwa kwabo kwedijithali, lapho basifaka khona ku-drip kuphela, kuphenduka kungcolise kakhulu futhi kungalingani kunezwe elidala lezimboni. E-DRC, izingane eziphelelwa yimpilo futhi kaningi izimpilo zazo ezimayini zase-coltan cishe ngeke zibe nalo ithuba lokubona ngolunye usuku zinikeza enye yalezi Smartphones eziyonikeza izingane zayo.
Ngokuqinisekile, abantu baseMaliya noma abaseCongo abayona amapharagisi obuhle. Ukuthuthukiswa kwamadolobha okungalawulwa kweBamako futhi Kinshasa Lamadolobha awalutho ngaphandle kwezimoto ezigcwele imfucuza kanye nemfucuza ye-anarchic. Imifula yethu, amachibi nemifula kungcoliswa udoti kanye nezikhwama zethu zepulasitiki. Ngaphezu kwalokho, imikhuba ejwayelekile yokudla okushisayo nokushisa noma yokucwaninga izinkuni ibeka izingozi ezinkulu kuwo womabili la mazwe ethu.
Ukukhula kwenani labantu, kuhambisane nokusilela kwenqubekelaphambili ebalulekile ekufinyeleleni okuyisisekelo kwamandla ashibhile, kwenze lesi simo saba sibi, futhi kuholele ekubhujisweni kancane kancane kwamabhande amahlathi, “izihlangu zemvelo” eziqinisekile eduze kwamadolobha amakhulu. DRC. EMali nakulo lonke iSahel, lezi zenzo ezifanayo ziye zenza ukuba ugwadule luqhubeke. Lokhu ngokwemvelo kunomthelela ekwandeni kwezinhlekelele zesimo sezulu.
Njengomkhiqizi omncane wama-GHG, noma kunjalo, kufanele sicabange ukuthi i-Afrika kungekudala izokuba phakathi kokuqakatheke kakhulu, ukubuswa kwabantu kanye nokuthuthukiswa komnotho. Siyazi ukuthi lokhu kuzoba ukulimaza isimo sezulu, noma ngabe sizokwenza konke ukusiza ukuthola ezinye izixazululo ezingeni lendawo noma likazwelonke (ilanga, ukuqothulwa kwamahlathi, njll.).
Isibonelo esingesihle esinikezwe yizifunda ezingcolisa ngokuqinisekile ngeke sikhuthaze abantu baseMalawi naseCongo ukuthi banciphise intuthuko yabo
Kodwa-ke, isibonelo esingesihle esinikezwe yizindawo ezingcolisa umhlaba, ezingavumi ukuvumelana ngezixazululo zokubopha, ngokuqinisekile ngeke zikhuthaze abantu baseMalawi naseCongo ukuthi banciphise intuthuko yabo. Simema la mazwe ukuthi ahole ngesibonelo, ekugcineni aqale ushintsho lwangempela lwendalo, futhi abuyisele isikweletu sawo semvelo ngokuxhasa ngemali amaphrojekthi ezemvelo afisa ukwenzeka emazweni ethu.
ICityune isayiniwe nguGuy Muyembe, umxhumanisi kazwelonke we-HabariRDC
TELES RELAY 13952 izikhala 0 amazwana
Izimayini - uChristel Bories (Eramet): "ICamibia neSenegal ziqinisa izimpande zethu zase-Afrika" - JeuneAfrique.com
Ukukhethwa kukaMongameli: ukungezwani kosuku lokuqala lokuvota phesheya - JeuneAfrique.com
U-Apple usanda kuthumela enye yezinzuzo ezinkulu kakhulu zekota yazo zonke…
AbaseMelika abasukele eWuhan, eChina, bafuna ukuphunyula kwi-coronavirus -…
UMeghan Markle kanye nePrince Harry "bethukile" ngesinqumo seNdlovukazi u-Elizabeth ...
Unina kaPrince: indlela uPrince Alice asindisa ngayo wonke umndeni kumaNazi
ENdiya: AmaNdiya aphesheya aqala ukudla inyama yenkomo ngoba ...
"Njalo lapho umbuso ucela amabutho aseFrance ukuthi ame ...
Iphephandaba le-21 likaDisemba 19 2019 - VIDEO
UMeghan Markle noPrince Harry bebezokwamukelwa nguJustin…
Ngenxa yemodicality: i-Apple Mac Pro ilula…
I-India: India ne-Iran kufanele basebenze ukusheshisa…
UNgqongqoshe uTiébilé DRAMÉ unikeza abadala isidlo sasemini…
NAMUHLA INDLELA UMESI AQHUMA NGAYO IZIGIDI KAKHULU! - IVIDEO
I-ABC yathuthukisa isiteyithi sabantu "abangamashumi amathathu ananye"